Myanmar OA6: High School တက်နေသော တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ
Posted by Mr.Pooh @ မောင်ပွတ် at 11:26 AM
har har ha!!
nice post. I like ur style of writing (mocking the irony of the current situation) keep it up bro!
ARR Payy tal byooo
ကျွန်တော်ကတော့ UCSY state ကျောင်းသားလေးပေါ့...
Pooh ရေ..ကျွန်တော် ခင်ဗျား Satire စာ တွေ တစ်ပုဒ် နဲ့ဘလော့(ခ) ကို ကျွန်တော့် လင့်(ခ) မှာညွှန်း ထားတယ်..ခွင့်ပြုမယ်ထင်ပါတယ်..သွားဖတ်ကြည့်ပါဦး
Very please to seeanew generation of satire writer in our Myanmar literature...
Very Nice post again,
Mr Poosh! Congratulation.
ဒါမျိုးများများ ရေးပါဗျို့ ။
I'm also state student of UCSY.
I like ur post so much.
ခေတ် စနစ်ကို မှတ်တမ်းတင်ရာလဲ ရောက်တာမို့
so attractive post.
congratulation to show the current situation of UCSY.